Samee Flash XML Gallery iyo Change XML si aad u cusboonaysiiso
> Resource > Talooyin > Abuur Flash XML Gallery iyo XML Muqaal
Tutorial Tani waxay ku tusi doona sida loo sameeyo si fudud gallery flash XML isticmaalaya sawiro fudayd, loo baahan yahay aqoon hore u lahayn.
Si aad ugu sawirro aad iyo abuuro gallery flash XML iyo XML slideshow cajiib ah, XML gallery qalab qaadashada wanaagsan sida Wondershare Flash Gallery Factory Deluxe noqon doonaan lagama maarmaan ah. Waa ogaado flash sawir gaare slideshow siinaya tiro balaadhan oo ah arrimo slideshow flash oo lacag la'aan ah iyo guurka & mooshinka saamayn aad u. Halkan waxa aad ka baran doontaa faahfaahin ku saabsan sida loo sameeyo gallery XML ama slideshow iyo beddelo file XML si aad u cusboonaysiiso gallery XML la content cusub (images, caption, desription, muddada, iwm).
Burcad software XML qaadashada gallery ah, doortaan hab ka fursadaha Gallery Mode iyo Muqaal Mode. Halkan waxaan dooran Gallery Mode.
Waxaad bilaabi doonaa ka "Browse" tab. Riix badhanka "Photo dar" iyo dooran sawir ka computer si storyboard ah. Haddii aad rabto in aad music soo jeeda, guji "Add Music" badhanka si ay u doortaan file music kombiyuutarka si aad u XML gallery.
2 Dooro ah Template XML Gallery
Flash Gallery Factory Deluxe Waxaa ka mid ah in ka badan 40 foom oo lacag la'aan ah gallery XML sawir ku Gallery Mode. Guji fudud mid aad jeceshahay iyo in aad isla markiiba waxaa ku eegaan karo si xaq. Waxaa jira fursado aad u astaysto aad gallery, oo ay ku jiraan midab asalka iyo sanamyadii soo jeeda.
3 Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo Samee Flash XML Gallery
Tag "naadiya" tab, guji "Save" si ay wax soo saarka files XML gallery in computer si aad gali kartaa in aad website. File Jabbuuti A, bogga HTML ah oo "khayraadka" folder la files XML si toos ah ahbaa doonaa.
Waxa kale oo aad si toos ah u gali kartaa XML gallery in aad website via FTP.
Talaabada 4: habeynta XML Faylal ay si aad u cusboonaysiiso Flash Gallery
Mid ka mid ah faa'iido u ah XML waa in aad si fudud u cusbooneysiin karaa slideshow la content cusub. Laakiin iyada oo aan dhalin ee Jabbuuti oo HTML, waxaase laga yaabaa in ay adag tahay iyo waqti. By file XML isbedel, Flash akhriyo nuxurka ka file XML iyo bandhigay on your XML gallery goobtii.
Diyaari sanamyada iyo thumbnails ay la barnaamijka tafatirka image jeceshahay. Markaas:
1. Si aad u bedesho images, caption iyo sharaxaad, muddada, iwm, u furan " /resource/xml/album_1/slide.xml "iyo in la beddelo qoraalka. Hoos waxaa ku qoran mid ka mid image. Waxaad ku nuqul karaa in ay ka mid images badan oo aad XML gallery.
<ViewItem nooca = "image" startTime = "4" duration = "4">
<info> <caption> Photo Araar </ caption>
<sharaxaad> <! [CDATA [<font wajiga = "aan halla" color = "# FFFFFF "size =" 14 "> Photo Description </ font>]]> </ sharaxaad>
<size dataInfo = "0" url = "khayraadka / RES / images / album_1 / image_0.jpg" thumbUrl = "khayraadka /res/images/album_1/thumb_0.jpg "/>
2. Si aad u bedesho XML template gallery, nuqul file template (* .swf ama folder) ee "Template" folder hoos goobta rakibo (sida caadiga ah C: \_ Program Files \_ Wondershare \_ Flash Gallery Factory \_ Template \_) si ay "/ kheyraadka / RES / dadka kale /, oo u furan "/resource/config.xml" in la beddelo DEAD sida hoos.
<Url = maTempXMLData " khayraadka / RES / dadka kale / HemicycleIn.swf "/>
<Url = maTempXMLData " khayraadka / RES / dadka kale / template / template.xml "/>
In yar oo ka mid ah way adag tahay? Ma aha ee marka aad u addoonsada. XML waa sida sixir ah!